Amụma Nzuzo - 192.168.8.1
Adreesị weebụsaịtị anyị bụ: https://19216881.one.
Ọ bụrụ na ịhapụ okwu na saịtị anyị ị nwere ike ịpụ na ịchekwa aha gị, adreesị ozi-e na ebe nrụọrụ weebụ na kuki. Ihe ndị a bụ maka mma gị ka i wee ghara ịgbanye nkọwa gị mgbe ị na-ahapụ okwu ọzọ. Kuki ndị a ga-adịru otu afọ.
Ọ bụrụ na ị gara na nbanye anyị, anyị ga-edozi kuki oge iji chọpụta ma ọ bụrụ na ihe nchọgharị gị na-anabata kuki. Kuki a enweghị data onwe onye ma tụfuo mgbe ị mechiri nchọgharị gị.